FUDUD - FUNGICIDE - TILMAAMO LOOGU ISTICMAALO DAROOGADA - SOOSAARKA DALAGGA
Fiktooriya "Skor" waa shey kiimiko adag oo loogu talagalay in lagu ilaaliyo miraha iyo dalagyada dalagga, iyo sidoo kale khudradda laga helo bakteeriyada iyo fungal ee cudurada badan ee saameeya dhirtaas.
"Habboon": sharaxaadda daroogada
Daroogada "Skor" waxay leedahay hantida si ay u bixiso ilaalin joogta ah iyo daaweyn wax ku ool ah ee dhirta iyo, aad u muhiim ah, waxaa loo isticmaali karaa marxalad kasta oo horumarineed.
Sida mid ka mid ah fungicides si fiican loo yaqaan geedo midho leh, daroogada "Skor" waxaa loo isticmaalaa si ay ula dagaalamaan qolofka (gaar ahaan tufaaxa, isteroberi iyo miro kale iyo miro dhagax ah), caarada budada ah, caleenta caleen, xayawaanka caleenta iyo caleemaha, xoqista, cocomycosis, moniliosis.
In beerashada khudradda, daroogada this waxay ka caawisaa inay la qabsato firirada goor dambe, baro cad iyo brown ah ee dabacasaha, yaanyada iyo baradhada, kaniisadaha beetroot, iyo xayrta maqaarka ee qajaarka, bocorka, zucchini, iwm.
Buundada miraha (gooseberries, currants) ayaa sidoo kale waxaa badanaa ku dhaca caarada budada, taas oo lagu xakameyn karo fangasadan. Daroogada "Skor" waa mid ka mid ah hababka ugu fiican ee ilaalinta nidaamsan ee canab. Gaar ahaan, daroogada waxay ka hortagtaa oo u dawaysaa cudurada canugga ah ee sifaha ah sida xayrta budada ah, kalluunka madow iyo cawl, cirridka, rubella.
Marka lagu daro cudurradan, "Skor" ayaa sidoo kale khuseeya si loo ilaaliyo dhirta rootiyada rootiga, miraha caleen, abuurka caaryada iyo dhibaatooyin kale oo badan.
Daawada waxaa laga iibsan karaa dukaanka khaaska ah ama waxaad ku dalban kartaa internetka. Miyuu ku jiraa "Skor" oo ah qaabka emulsion-ka ee ku jirta ambalaaska ama dhalooyinka.
Waxyaabaha firfircoon ee daroogada "Scor" - difenoconazole 250 g / l, oo ka tirsan fasalka kiimikada ee triazoles.
Ma taqaanaa? Kiimikooyinka fasalka Triazole ee warshadaha agrotechnical ayaa beddelay benzimidazoles sun ah. Fungicides casriyeynta casriga ah waxaa ka muuqda qiyaaso afar diyaarsan oo kala duwan kuwaas oo leh codsiyo badan oo kala duwan iyo qaab gaar ah oo ficil ah oo ku saabsan jirooyinka dhirta, taas oo dhammaantood ay hadda ku raaxeystaan ​​guulo ganacsi weyn waxayna iibiyaan ka fiican dhammaan fungicides kale.
Qaabka kiimikada difenoconazole wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan oo loola dagaalamo cudurada dhirta fungal marka la barbar dhigo fangasida kale ee triazole.
Sidaas darteed, walaxdani waxay awood u leedahay in ay nuugaan dhammaan xubnaha dhirta ee geeddi-socodka sawir-dhiska.
Farsamaynta saameynta daroogada "Scor" ee ku saabsan cudurada cudurada waxay ka kooban yihiin xakamaynta dhaqdhaqaaqooda iyo, taas awgeed, daciifinta dhaawaca dambe ee geedka iyo yareynta xoojinta cudurka.
Haddii aad isticmaasho fangaska "Skor" si sax ah, si waafaqsan tilmaamaha isticmaalka, waxay ka hortagtaa samaynta noocyada adkeysiga ee jirada.
"Skor" waa diyaar u ah daaweynta dhirta, waxtarkeeda taas oo muujinaysa in nidaamka noocan oo kale ah lagu fulinayo marxaladda ugu horeysa ee caabuqa - ugu dambeyn 2-3 maalmood ka dib markii uu soo galo geedka.
Daroogada "Scor" maaha mid wax ku ool ah oo lagu xakameynayo fungi peronosporic (Peronosporales), iyo sidoo kale marxaladda cudurku marka uu ka soo baxo wakiilka keena cudurkan horayba loogu sameeyay dhirta cudurka qaba.
Faafidda fangasaska iyada oo loo marayo weelasha warshadda ayaa si dhakhso ah loo fuliyaa. Mudo laba saacadood gudahood ka dib daaweynta, daroogadu waxay bilaabmaysaa inay si firfircoon uga shaqeyso mycelium ee fungus pathogenic, xannibaysa koritaankeeda iyo yar yareeyn heerka heerarka.
Saameynta daawada ku jirta miraha inta lagu jiro daweyntooda daaweynta waa sida soo socota: walaxda firfircoon waxay ku gashaa abuur, ku dhex mari karta qolofka, waxaana lagu kaydiyaa unugyada ilaa ay ka bilaabato inay koraan, ka dib marka ay ku faafto dhamaan cagaarka cagaaran ee warshadda dhalinyarada.
Sababtoo ah nuugista si deg-deg ah, waxtarka firfircoonida maaha mid ku xiran roobka iyo dabaysha, laakiin xaaladaha heerkulka waxay saameeyaan saameeynta saameynta. Sidaa daraadeed, walaxda firfircoon waxay ka shaqeysaa heerkulka heerkulka 14-25 ° C; oo ay wehliso weyn oo ka imanaya xuduudahaan, gaar ahaan kuwa hoose, dareen-celinta, siday u kala horreeyaan, hoos u dhacaan.
Marka laga soo tago ilaalinta tooska ah ee loo yaqaan "fungi pathogenic", isticmaalka "Skora" ayaa sidoo kale u ogolaanaya:
si loo kordhiyo baadiyaha by hal iyo badh jeer, dhererka caleemaha, tirada iyo caleemaha caleemaha dhirta sababtoo ah xoojinta guud ee difaaca ay;
kordhinta waqtiga ilaalinta dusha cagaaran ee dhirta, taas oo ka dhalatay geeddi-socodka sawir-qaadisku u dhaco si ka wanaagsan oo dheer iyo, si waafaqsan, waxay kordhisaa dhalidda;
si loo dedejiyo biqilka abuurka (tusaale ahaan, khudradda - celcelis ahaan laba maalmood), iyo sidoo kale si loo hagaajiyo biqilka;
kordhinta nolosha shelf ee abuurka.
Marka lagu daaweeyo dhirta sida qiyaas ka hortag ah, saameynta ilaalinta daroogada "Skor" waxay socotaa illaa toddobaad ilaa toban maalmood, si kastaba ha ahaatee, haddii dhirta ku dhow ay cudurku ku dhacaan oo ay jirto khatar dhab ah oo infekshan ah, maalinta siddeedaad ma naqaanno caqabadda dhirta inay sii socoto.
Baaritaanka maqaarka iyo xayrta shimbiraha ayaa ah kuwa ugu adkeysanaya saamaynta daroogada inta lagu jiro xilliga daciifinta diiradeeda, sidaas darteed dhirta ayaa loo tixgelin karaa in laga ilaaliyo cudurkan 6-7 maalmood ka dib marka la daaweeyo Skor loogu talagalay ulajeeddooyin ka hortag ah iyo 4-5 maalmood marka uu jiro cudurka.
Tilmaamaha isticmaalka daroogada, sida loo abuuro "Dharoor"
"Fur", sida fungicides kale ee beerta, waa wax ku ool ah haddii aad raacdo tilmaamo cad oo ku saabsan habka iyo wakhtiga isticmaalka, iyo xeerarkani waxay ku xiran tahay cudurka ka soo horjeeda daroogada loo isticmaalo, iyo nooca dhirta loo maleynayo in la shaqeynayo.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira talooyin guud oo lagu dabakhi karo kiisaska oo dhan. Sidaa daraadeed, xalinta daroogada "Scor" lama sii diyaarin karo kahor. Dilida daroogada sida waafaqsan tilmaamaha isla markiiba ka hor isticmaalka.
Qaddarka fangasaydhka lagama maarmaanka u ah daaweynta warshad ama qallajin abuurka ayaa marka hore kala diri, oo si fiican isugu qasan, qadar yar oo kuleyl ah (qiyaastii 25 digrii), ka dibna xalka maadiga si tartiib tartiib ah loogu keenay qaddarka loo baahan yahay adoo ku daraya qadarka biyaha loo baahan yahay.
Dheeraad ah - ku xiran shaqada.
Sidaa darteed, daaweynta dhirta gudaha (tani waxay sidoo kale khusaysaa in lagu buufiyo oo lagu qasi karo abuurka ama gooynta), celcelis ahaan 0.2 ilaa 2 ml oo ah daroogada halkii litir oo biyo ah ayaa loo baahan yahay. Marka la diyaarinayo xalka, waxaa lagu talinayaa in la isticmaalo siriinjo caafimaad si looga hortago xad dhaafka. Si aad u isticmaasho shaqo ballaadhan, qiyaasta lama go'aamin karo saxnaanta farmashiyahan, laakiin waxaad weli u baahan tahay inaad xasuusnaato in xaddi ku filan daroogada ay yareyneyso saameynteeda waxayna keeni kartaa caabbinta (takoorka), xad dhaafkuna halis ayuu u yahay dhirta lafteeda.
Dhirta waxaa lagu daaweeyaa xal 2 ml oo ah daawada halkii baaldi oo biyo ah, isticmaalka geed kasta wuxuu ka jiraa 2 illaa 5 litir, iyadoo ku xiran cabbirka.
Khudaarta (baradhada, yaanyada) ayaa lagu daaweeyaa xal 1 ml oo ah daroogada halkii litir oo biyo ah, isticmaalka ugu badnaan 1 l halkii geedka.
Isticmaalka daroogada, sida lagu sheegay, waa la isku-hagaajin karaa iyada oo ku xidhan nooca cudurka ee looga hortago, gaar ahaan:
xayrta maqaarka ah, qolof, cawska, caleen, cocomycosis: 2 ml ayaa lagu qasi karaa baaldi biyo ah,
in laga takhaluso Alternaria, 3.5 ml ee diyaarinta waxaa la geynayaa baaldi biyo ah, 4 ml oo kallana cawl;
Cadaan, madow, madow iyo meelo kale waxay u baahan yihiin xitaa xoojin xoog leh oo lagu daaweyn karo (5 ml baaldi biyo ah).
Tirada daaweyntu waxay sidoo kale ku xiran tahay nooca dhaqanka iyo cudurka.
Khudaarta, sida caadiga ah, looma daaweyn karo wax aan ka badnayn laba jeer (marka laga reebo xayrta maqaarka iyo alternariosis, halkaasoo lagu buufiyo saddexaad), geedo midho leh - aan ka badneyn saddex jeer.
Xaaladaha daran, afar daaweyn ayaa suurtogal ah, laakiin kan waa ugu badnaan. Xaalad waliba, buufinta ugu dambaysa ayaa la samayn karaa ugu dambeyn saddex toddobaad kahor intaadan soo qaadin midhaha.
Waa muhiim! Kororka tirada daaweynta, iyo sidoo kale feejignaanta khaldan ee daroogada waxay kicin kartaa abuuritaanka noocyada adkeysiga ee jirada. Sidaa darteed, haddii tirada daaweynta ay bixiso amarradu aysan keenin natiijo waxtar leh, isticmaalka daroogada waa in la joojiyaa, iyada oo la bedelay fangasad kale oo ah koox kiimiko ah oo kala duwan oo ku kala duwan qaabka ficilka.
Haddii buufinta loo qaadaa ujeedooyin ka hortag ah, waa ku filan in la sameeyo laba jeer - ka hor inta ubax (wakhtiga formation formation) iyo ka dib ubax.
Mudada u dhaxaysa buufinada sida qiyaasta tallaalka ah waa 10-12 maalmood, marxaladda cudurka - hoos u dhacdey ilaa 8 maalmood.
Daroogada "Scor" waa sida, sida lagu sheegay, fangas dil ah, laakiin waxaa jira tilmaamo gaar ah oo loo isticmaalo canabkiisa. Noocyada fungicides ee canab, "Skor" ayaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo cuduro kala duwan, laakiin waxay si gaar ah waxtar u tahay la dagaallanka caarada budada ah (oidium).
Daaweynta ugu horeysa ee fungicides for canab waa la sameeyaa isla markiiba ka dib muuqaalka calaamadaha ugu horeeya ee cudurka, ama dhamaadka muddada ugu horeysay ee cudurku, ama, ujeedooyinka prophylactic, ka dib markii geedka canabka ah koray oo ku saabsan 20 cm.
Midda labaad, daaweynta xakamaynta waxaa loogu talagalay ka hortagga iyo dhacdo toddobaad ka hor bilowga bilicda firfircoon (waqtiga dhismaha budo).
Daaweynta saddexaad waxay ilaalineysaa berry mustaqbalka, waxaa la sameeyaa isla markiiba ka dib dhamaadka ubax. Haddii geedka canabka ah ee cudurku ku dhaco, daaweyn kale ayaa la sameeyaa xilligan xaadirka ah.
Wixii daaweynta canab ka soo xiirta budada ah ee daroogada "Skor" oo lagu qasi jiray 5 ml oo baaldi ah (10 l) oo biyo ah.
Si looga hortago daroogada inay lumiso hawsheeda kiimikada, waa in lagu keydiyaa qol qallalan, madow iyo qabow. Ka hor inta aan la furin xirmadda, nolol shelf waa saddex sano, laakiin marka weelka la daabaco, waa in la isticmaalo ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka, iyada oo la ilaalinayo dareenka ugu sarreeya.
Iskuxidhid "Skora" oo leh daawooyin kale
Daroogada "Scor" guud ahaan waxay ku xirantahay inta badan cayayaanka cayayaanka (fungicides, insecticides, acaricides) loo isticmaalo beeraha.
Si kastaba ha ahaatee, si looga fogaado saameyn aan loo baahnayn, isdhexgalka walxaha firfircoon ee leh xeryahooda kale ayaa si fiican loo caddeeyey, iyada oo la tixraacayo tilmaamaha.
Si loo kordhiyo waxtarka soo-gaadhista iyo in laga fogaado iska-caabbinta, "Skor" waxaa lagu qasbi karaa fungicides-ka taabashada iyo kiimikooyinka kale ee loo isticmaalo cudurrada iyo cayayaanka (tusaale ahaan, Topaz, Decis-Extra, Karate, Summi-Alpha, Falcon, iwm.).
Waa muhiim! Daroogada "Skor" lama isku dari karo kiimikada leh fal-celin alkali ah.
Isku qasinta xalka "Dhallaanka" diyaarsan oo leh walax suuf ah si loo wanaajiyo muddada xiriirka warshadda waa la oggol yahay, laakiin looma baahna, maadaama daawadani si wanaagsan loo ilaaliyo caleemaha iyo iyada oo aan taageero dheeraad ah la siin.
"Skor": faa'iidooyinka iyo faa'iido darrida isticmaalka fungicide
Daroogada "Skor" waxay u qalantay tiro badan oo ah jawaab celin waxtar leh ee ka soo horjeeda cudurrada sida qolofka, xayrta maqaarka, dhajinta, iwm.
Gaar ahaan, ka mid ah faa'iidooyinka daroogada ee ku saabsan fungicides kale waa kuwan soo socda:
awood u leh inay gasho dhammaan unugyada dhirta cagaaran;
waxay u dhaqmaysaa si madaxbannaan iyo roobab;
waxay leedahay siyaabo dheeraad ah, marka lagu daro daaweynta (waxay caleemaha ka baxdaa muddo dheer, waxay kordhisaa dhalidda, waxay hagaajisaa waqtiga kaydinta abuurka iyo biqilka);
wuxuu keenaa mid aad u hooseeya, marka la barbardhigo daawooyinka kale, iska caabinta jirooyinka;
waa sunta sunta ah, ma waxyeelo bay'ada waana mid aan khatar u ahayn bani-aadamka;
wuxuu bixiyaa kan ugu sarreeya, marka la barbardhigo triazole kale, saamaynta ilaalinta geedo khudradeed laga soo qaado cudurrada ugu halista badan;
waxaa loo isticmaali karaa dhammaan wejiyada koritaanka dhirta, marka laga reebo xilliga beergooyska;
Si kastaba ha ahaatee, bannaanka u badan ayaa xusay qaar ka mid ah cilladaha daroogada. Waxaa ka mid ah:
halkii sare, marka la barbardhigo daawooyinka kale, isticmaalka xoogga leh ee kharashka badan;
Wakhtiga sugitaanka muddada dheer (qiyaastii 20 maalmood);
waxtar la'aan ka soo horjeeda cayayaanka miraha;
lagu arkay sanadihii la soo dhaafay, kororka ka soo horjeeda walxaha firfircoon ee kilyaha budada ah ee keena keena;
hoos u dhac ku yimid waxtarka heerkulka hoose;
marka loo eego phytosporosis iyo spot brown on baradho, daroogooyinka kale ee leh isla hal-firfircoon, laakiin wakhti sugitaan gaaban, waxay waxtar badan yihiin;
Baakooyinka aan cidhiidhi ahayn: meesha ugu hooseysa dhalada waxaa ku jiri doona qadar xoog leh oo loo baahan yahay in la tuuro si fudud sababtoo ah lama saari karo.
Ma taqaanaa? Si aad si buuxda u isticmaashid waxyaabaha ku jirta dhalada, waxaad si taxadar leh u gooyaa mindida labada dhinac isla markaana ku dhex tuur weelka ay ku jirto xalinta cawska - biyaha ayaa dhaqaajin doona inta ka hadhay dareenka dhalada.
Tallaabooyinka amniga markaad isticmaasho daroogada
Daroogada "Skor" ma aha suntan xooggan. Kama shubo xuubka xuubka indhaha, ma gubto maqaarka, ma saameynayso maskaxda.
Daawooyinka gaarka ah ee loo isticmaalo daroogada uma baahna, laakiin weli buufinta waa in lagu sameeyaa gacmo-gashi gacmeed iyo maaskaro (respirator). Sidaa daraadeed maandooriyadu ma xajin timo, waa inaad sidoo kale xirtaa koofiyad.
Kama wada shaqeyn kartid shaqada daroogada oo la cuno iyo sigaar cabista. Haddii walxaha firfircooni uu galo afka afka, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo dhareer madax-banaan oo madax bannaan, ka dibna la xiriir xarun caafimaad.
Maaha khatar ah shimbiraha, dhulka worms, shinni, caarada yaryar iyo waxyaabo kale. Si kastaba ha ahaatee, daawadani waa walxo sun ah oo kalluun ah, markaa waa inaad iska ilaalisaa in ay sii wado mawjadaha biyaha, iyo aagga nadaafadda ee beeraha kalluunka isticmaalaan taxadar aad u daran.
Guud ahaan, waxaa la sheegi karaa in phytotoxicity dhexdhexaad ah ee daroogada "Skor" ma muujin laftiisa haddii aan raacno talooyinka soo saaraha iyo si taxadar leh u taxaddar.